Nagarik News - निजीको छात्रवृत्तिमा नेताका फोन
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेतासँग फोनमा गफ गर्दै। तस्बिरः रुबी राैनियार
काठमाडौं-'हेलो सर, म नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य बोलेको, मेरा आफन्तको छोराका लागि पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति सिफारिस गरिदिनुपर्यो ।'
मंगलबार काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताहाचल पुग्दा सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायणकाजी कासिछवालाई एक नेता छात्रवृत्ति सिफारिसका लागि फोनबाट दबाब दिँदै थिए ।
कहिले नेपाली कांग्रेसको, कहिले क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन त कहिले एमाले निकट नेताको, लगातार फोन आइरहेका थिए । उनलाई फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ थियो ।
नेतालाई जवाफ दिँदै उनी भन्थे, 'स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिन्छ, छात्रवृत्ति गरिब र निमुखालाई हो, तपाईंहरु त सिस्टमबाट आउनुपर्यो ।'
फोन गर्ने नेताका राजनीतिक आबद्धता फरक–फरक भए पनि उनीहरुको दबाब एकै थियो, 'निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा आफ्नालाई पार्ने ।
नागरिककर्मी शिक्षा कार्यालयमा दुई घन्टा बस्दा गरिब र निमुखाका लागि छुट्ट्याएकोे छात्रवृत्ति कोटामा विभिन्न दलका १० भन्दा बढी नेताको फोन आयो । केही विद्यार्थी नेता आफैं कार्यालय पुगेर निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि आफ्नालाई सिफारिस गराउन दबाब दिइरहेका थिए ।
सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न, गरिब, दलित, अपांग, महिला र जनजातिका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा छुट्ट्याए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका– २०६९ को परिच्छेद ६ अनुसार १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा ३.४ प्रतिशत र ६.६ प्रतिशत स्कुल आफैंले छनोट गर्न पाउँछ ।
सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने जनआन्दोलनमा सहिद भएका व्यक्तिका सन्तति, जनआन्दोलनका घाइते एवं तिनीहरुको सन्तति, द्वन्द्वपीडित व्यक्ति एवं तिनका सन्ततिलाई समेत प्राथमिकतासाथ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर यो सूचना लक्षित वर्गसम्म पुग्नै नसकेका कारण वास्तविक पक्ष छात्रवृत्ति सुविधाबाट वन्चित छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै भेटिएका अभिभावक सोमनाथ श्रेष्ठको छोरो ताहाचलमा रहेको होलिभिजन स्कुलमा कक्षा ९ मा पढ्छ । कपडा पसलमा नोकरी गरी उनले परिवार पालिरहेका छन् । छात्रवृत्तिबारे उनलाई थाहै रहेनछ ।
'आजै मैले कपडा पसलमै बसिरहेको समयमा साथीभाइबाट निजी स्कुलमा पनि गरिबको सन्तानलाई छात्रवृत्तिबारे थाहा पाएँ र फारम भर्न आएँ,' काभ्रेका भूकम्पपीडित श्रेष्ठको गुनासो छ, 'हेर्नुस् त जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै नेताहरु आएर दबाब दिइरहेका छन् भने फोनबाट पनि सिफारिसका लागि कुरा गरेको मैले पनि सुनेँ ।'
मंगलबारै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भेटिएका गोर्खाका रामबहादुर परियारको पनि गुनासो उस्तै छ । दलित, आर्थिक रुपमा विपन्न उनले भूकम्पमा घरबार सबै गुमाए । सिलाइ काम गर्ने उनले छोरालाई पहिले कक्षा ७ सम्म बालाजु नजिकैको जनजागृति स्कुलमा पढाए । तीन वर्षअघि उनले जिल्लाले विपन्न र दलित वर्गका नानीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने थाहा पाए र नजिकैको सिद्धार्थ वनस्थलीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनी सिफारिस पनि पाए तर स्कुल पुग्दा स्कुलले विभिन्न बहाना गरेर छात्रवृत्ति दिनै मानेन ।
'पहिले जिल्लाको सिफारिस लिएर जाँदा बाबुलाई भर्ना लिनै मानेन,' परियारले मलिन स्वरमा भने, 'पछि मैले बल्लतल्ल अनुरोध गरेपछि आधासम्म छुट दियो ।' उनले थपे, 'यो छात्रवृत्ति हामी गरिब निमुखाका लागि होइन रहेछ ।'
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सिफारिस गरे पनि स्कुल पुग्दा त्यस्ता विद्यार्थीलाई पहिले त भर्ना नै लिँदैन भने दबाबमा भर्ना लिए पनि छात्रवृत्ति दिन नमानेको अभिभावकको गुनासो छ ।
विराटनगरका मनोज साह यस वर्ष छोरीलाई चावहिलमा रहेको टेक्सस स्कुलमा कक्षा ८ मा भर्ना गराउन पूर्ण निःशुल्कको सिफारिस लिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय आएका थिए । एक कार्यालयमा सहायक पदमा कार्यरत छन् । मुस्किलले मासिक उनको तलब ७ हजार हुन्छ ।
'यति तलबमा छोरी पढाउने कि घरको बाल तिर्ने या खाना जुटाउने ?' निरक्षर साह भन्छन्, 'आफूले त पढ्न पाइएन, त्यही भएर छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन खोजेको हुँ ।' उनले थपे, 'तर हामी गरिबलाई त सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति नेताकै कोल्टो परेपछि हाम्रा छोरीले कसरी पाउने ?'
माथिका अभिभावक त उदाहरण मात्र हुन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भेटिएका सयभन्दा बढी अभिभावकको एउटै प्रश्न थियो– जिल्लाले सिफारिस गरे पनि निजी विद्यालयले पहिले भर्ना लिनै मान्दैनन्, लिए पनि छुट नदिने सर्तमै लिन्छन् । अभिभावक बाध्य भएर स्कुलको बार्गेनिङमा भर्ना गराउनुपर्ने बाध्यता बन्ने अर्का मजदुर अभिभावक माधव भट्टले पीडा पोखे ।
सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी कासिछवाले वैशाख १ गते देखि निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति सूचना प्रकाशित गरेदेखि नै नेताहरुको सिफारिस र दबाबमा नाम निकाल्न फोन आएर हैरान भएको बताए ।
'यो छात्रवृत्ति विपन्न र निमुखाका सन्तानलाई पूर्ण उपलब्ध गराउने हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले जति दबाब आए पनि कसैलाई हेरेका छैनौं, वास्तविक र लक्षित वर्गका अभिभावकको सन्तानलाई स्थानीय निकायको सिफारिस र सबै कागजात तथा परिचयपत्र हेरेर मात्र सिफारिस गरिरहेका छौं ।'
जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरप्रसाद गौतमले भने, 'नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा गरिब र निमुखाको पहुँच नभएको स्विकारे । उनले आफूलाई जिल्लामा बसेर काम गर्नसमेत मुस्किल परेको सुनाए ।
'निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत सिफारिसमा पनि हुनेखाने र राजनीतिकर्मीको पकडमा रहेको मैले पाएको छु,' गौतमले भने, 'विद्यालयमा छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रिया पनि व्यवस्थित छैन ।'
उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब र निमुखा बालबालिकालाई शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउन शिक्षा ऐन–नियममै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनैपर्ने सर्त छ । अनि मात्र सञ्चालन अनुमति दिइन्छ । देशभरिकै निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा भने विशेष गरी नेताकै आसेपासेको बोलवाला रहेको उनको भनाइ छ ।